လုကြားထဲမှာ စမတ်ဖုန်းသုံးတဲ့အခါ ဆောင်သင့် ရှောင်သင့်တာလေးတွေ... - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > App > လုကြားထဲမှာ စမတ်ဖုန်းသုံးတဲ့အခါ ဆောင်သင့် ရှောင်သင့်တာလေးတွေ...
လုကြားထဲမှာ စမတ်ဖုန်းသုံးတဲ့အခါ ဆောင်သင့် ရှောင်သင့်တာလေးတွေ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 4:39 PM Andriod App, Android application, App
[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် လူကြားသူကြားထဲရောက်လို့ စမတ်ဖုန်းကိုသုံးရတော့မယ်ဆိုရင် သိထားရမယ့်အချက်ကလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဖုန်းကို ထမင်းစား စားပွဲပေါ်မတင်ထားသင့်ပါဘူး။ ဒါက ကိုယ်နဲ့အတူတူထမင်းစားနေတဲ့သူအပေါ် ရိုင်းရာကျပါတယ်။
ချိန်းတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် တခြားသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံကြတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းခေါ်တာ၊ စာပို့တာ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်သုံးနေတာ စတာတွေမလုပ်တာကောင်းပါတယ်။ သူများပြောတဲ့စကားကို စိတ်ဝင်စားသည်ဖြစ်စေ မဝင်စားသည်ဖြစ်စေ သေချာနားထောင်ပေးဖို့က ယဉ်ကျေးမှုပါ။
ဖုန်းမကိုင်ပါနဲ့ဆိုပေမယ့် အရေးတကြီး အရေးပေါ်ဖုန်းများ လာခဲ့သည်ရှိသော် “ဖုန်းခဏပြောဦးမယ်နော်” စသဖြင့် ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ခွင့်တောင်းပြီး သူများလည်း အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ရအောင်ခပ်ဝေးဝေးမှာသွားပြောလိုက်ပါ။
တခြားသူရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကို လေးစားပါ။ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲရှိနေချိန်မှာ ဘယ်လိုပြောပြောကိစ္စမရှိပေမယ့် သူများတွေရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ စပီကာဖွင့်ပြောတာက အရမ်းအနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပါတယ်။
အစည်းအဝေးမှာဖြစ်ဖြစ် တစ်ယောက်ယောက်က presentation ပေးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ် အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးနေကြတဲ့အချိန်မှာ ဖုန်းပိတ်ရင်ပိတ် ဒါမှမဟုတ် silence mode ပြောင်းထားပေးပါ။
အများပြည်သူစီးယာဉ်တွေ ဥပမာ ရထား၊ ဘတ်စ်ကားတွေ၊ ဧည့်ဆောင်တွေနဲ့ တန်းစီနေကြတဲ့အချိန်မျိုးမှာ ဖုန်းနဲ့စကားအကျယ်ကြီးပြောခြင်းကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။
တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ စကားပြောတဲ့အခါမျိုးမှာ သူပြောတာကို စိတ်ဝင်စားမှုပေးမှ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုရပါမယ်။ အဲ့လိုအချိန်တွေမှာ ဖုန်းသုံးနေတာ သူများပြောတာကိုနားမထောင်တာ မယဉ်ကျေးရာကျပါတယ်။
ဒီတော့ သူများအမြင်မှာ “ယဉ်ကျေးမှုမရှိလိုက်တာ သူများကိုအားမနာဘူး” အဲလိုအမြင်မခံကြရအောင် ဒီအချက်ကလေးတွေကို လိုက်နာရင် ပိုကောင်းမှာပါ။
[Unicode]ဖတျရနျ လူကွားသူကွားထဲရောကျလို့ စမတျဖုနျးကိုသုံးရတော့မယျဆိုရငျ သိထားရမယျ့အခကျြကလေးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
1.ဖုနျးကို ထမငျးစား စားပှဲပျေါမတငျထားသငျ့ပါဘူး။ ဒါက ကိုယျနဲ့အတူတူထမငျးစားနတေဲ့သူအပျေါ ရိုငျးရာကပြါတယျ။ 2. ခြိနျးတဲ့အခါမှာပဲဖွဈဖွဈ တခွားသူတှနေဲ့တှဆေုံ့ကွတဲ့အခါမှာပဲဖွဈဖွဈ ဖုနျးချေါတာ၊ စာပို့တာ၊ စတာတှမေလုပျတာကောငျးပါတယျ။ သူမြားပွောတဲ့စကားကို စိတျဝငျစားသညျဖွဈစေ မဝငျစားသညျဖွဈစေ သခြောနားထောငျပေးဖို့က ယဉျကြေးမှုပါ။ 3. ဖုနျးမကိုငျပါနဲ့ဆိုပမေယျ့ အရေးတကွီး အရေးပျေါဖုနျးမြား လာခဲ့သညျရှိသျော “ဖုနျးခဏပွောဦးမယျနျော” စသဖွငျ့ ယဉျကြေးမှုနဲ့ခှငျ့တောငျးပွီး သူမြားလညျး အနှောငျ့အယှကျမဖွဈရအောငျခပျဝေးဝေးမှာသှားပွောလိုကျပါ။ 4. တခွားသူရဲ့ ကိုယျပိုငျလှတျလပျခှငျ့ကို လေးစားပါ။ ကိုယျတဈယောကျထဲရှိနခြေိနျမှာ ဘယျလိုပွောပွောကိစ်စမရှိပမေယျ့ သူမြားတှရှေိတဲ့အခြိနျမှာတော့ စပီကာဖှငျ့ပွောတာက အရမျးအနှောငျ့အယှကျဖွဈပါတယျ။ 5. အစညျးအဝေးမှာဖွဈဖွဈ တဈယောကျယောကျက presentation ပေးနတောပဲဖွဈဖွဈ အဖှဲ့လိုကျဆှေးနှေးနကွေတဲ့အခြိနျမှာ ဖုနျးပိတျရငျပိတျ ဒါမှမဟုတျ silence mode ပွောငျးထားပေးပါ။ 6. အမြားပွညျသူစီးယာဉျတှေ ဥပမာ ရထား၊ ဘတျဈကားတှေ၊ ဧညျ့ဆောငျတှနေဲ့ တနျးစီနကွေတဲ့အခြိနျမြိုးမှာ ဖုနျးနဲ့စကားအကယျြကွီးပွောခွငျးကို ရှောငျသငျ့ပါတယျ။ 7. တဈယောကျယောကျနဲ့ စကားပွောတဲ့အခါမြိုးမှာ သူပွောတာကို စိတျဝငျစားမှုပေးမှ အပွနျအလှနျဆကျသှယျမှုရပါမယျ။ အဲ့လိုအခြိနျတှမှော ဖုနျးသုံးနတော သူမြားပွောတာကိုနားမထောငျတာ မယဉျကြေးရာကပြါတယျ။
ဒီတော့ သူမြားအမွငျမှာ “ယဉျကြေးမှုမရှိလိုကျတာ သူမြားကိုအားမနာဘူး” အဲလိုအမွငျမခံကွရအောငျ ဒီအခကျြကလေးတှကေို လိုကျနာရငျ ပိုကောငျးမှာပါ။
လုကြားထဲမှာ စမတ်ဖုန်းသုံးတဲ့အခါ ဆောင်သင့် ရှောင်သင့်တာလေးတွေ... Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 4:39 PM Rating:5[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် လူကြားသူကြားထဲရောက်လို့ စမတ်ဖုန်းကိုသုံးရတော့မယ်ဆိုရင် သိထားရမယ့်အချက်ကလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖုန်းကို ထမ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 4:39 PM